इसीडीमा सिकाउने कि पढाउने ?
काठमाडौं - प्रारम्भिक बाल सिकाइ केन्द्र (इसीडी)मा बालबालिकालाई सिकाउने हो कि पढाउने भन्नेमै शिक्षकहरु अनविज्ञ रहेका विज्ञहरुले बताएका छन् । इसीडीमा बालबालिकाहरुलाई पाठ्यपुस्तक पढाउने, गृहकार्य दिने, अंग्रेजी घोकाउने कार्य भइरहेको भन्दै उनीहरुले त्यो इसीडीको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् । इसीडीे पाठ्यक्रमको परिकल्पना बालबालिकहरुलाई सिकेको भन्ने थाहै नपाई खेल्दै, रमाउँदै अंक अक्षर सिक्नुपर्ने भएपनि उनीहरुलाई अंक र अक्षर रटाउने र घोकाउने गरिएको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाए । इसीडीमा अध्यापन गर्ने शिक ...
दुबै हातमा औंला नभए के भो र !
शम्भु यादव/लहानलहान–१९ छरापट्टीका सुरेशकुमार चौधरीको दुबै हातमा औंला छैनन् । औंला नभएपछि मानिसलाई धेरै काम गर्न अफ्ठ्यारो त हुन्छ नै । तर, उनमा त्यस्तो देखिएन । चौधरीले कक्षा १० सम्म पढे । अहिले एसइई परीक्षा दिइरहेका छन् । लेख्नलाई पनि असहज नभएको उनले सुनाए । तर, यस्ता परीक्षार्थीका लागि समय पनि बढी दिइएको छैन । चौधरी लक्ष्मण ललिता कुशवाहा मावि लहान परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा दिँदैछन् । मेरी चिल्र्डेन स्कूलमा चौधरी कक्षा ८ देखि १० सम्म पढेका छन् । उनलाई पढाइको सबै खर्च विद्यालयले नै व्यहो ...
कृष्ण मल्ल/बुटवल बाबु–आमाको मोटर साइकल दुर्घटनामा ज्यान गएपछि तीन बालबालिका शोकमा डुबेका छन् । उनीहरु तीनैजना विद्यालय तहका विद्यार्थी हुन् । उनीहरु बाबु आमा र तीन छोराछोरीका साथ एकल परिवारमा बस्दै आएका थिए । आमा–बुवाको मृत्युपछि कक्षा १० मा पढ्दै गरेकी सुस्मिता खनाल (१५) शोकमै बिहीबारदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिइरहेकी छिन् । उनको सिम्बल नम्बर ०४८९६८९ इ रहेको छ । उनी परिस्थितीवस साधारण अवस्थामा रहेकी विद्यार्थी होइनन् । परीक्षाको दुई दिन अघि मात्र उनको आमा–बुवाको दुर् ...
बन्द रहेको एउटा छात्रावासको बिजोक कथा
शम्भु यादव/लहान सूर्यनारायण सत्यनारायण मोरवैता यादव बहुमुखी क्याम्पस सिरहाको छात्रवास वर्षौंदेखि प्रयोगबिहीन अवस्थामा छ । दिनदिनै छात्रवास जीर्ण पनि बन्दै गएको छ । आठ वर्ष अगाडि विद्यार्थी संगठनबीच भएको विवादले यो छात्रवास तत्कालका लागि क्याम्पस प्रशासनले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । क्याम्पसको अन्य कुरामा विद्यार्थी संगठन तथा प्रमुखले चासो देखाएपनि छात्रवास पुनः सुचारु गर्न कसैले ध्यान दिएका छैनन् । कुनैबेला सुन्दर, सफा र रमणीय देखिने यो छात्रवास अहिले खण्डहर बन्दै गएको छ । क्याम्पस हाताभित्र ...
शिक्षकसंघ संखुवासभा अध्यक्षमा पुनः राई
संखुवासभा । नेपाल शिक्षक संघ संखुवासभाको अध्यक्षमा थिर बहादुर राई पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ । संघको आठौं जिल्ला अघिवेशनले राई अध्यक्षसँगै २७ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति नै निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो । त्यस्तै, अधिवेशनबाट महिला उपाध्यक्षमा सुष्मा कोइराला, खुला मा सेरबहादुर पराजुली र सचिवमा दिव्यराज अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । अर्थसचिवमा प्रशान्त श्रेष्ठ निर्वाचित हुँदा अर्थ सह–सचिव रिता त्रीताल,महिला सह–सचिवमा लक्ष्मी अधिकारीसँगै अन्य सह–सचिवहरुमा माधव भेट्वाल, बुद्धि कुलुङ, रा ...
विद्यालयलाई सुन्दर भवन, सभामुखलाई तेल !
सुदर्शन सिग्देल/खोकना (ललितपुर) मंगलबार मीठो मंगल धुन बज्दैथियो । नेवारी धिमे धुनमा संगीत गुञ्जायमान थियो । खचाखच मानव भिडमा हाकुपटासीमा सजिएका महिला सयौं थिए । सबै अनुहार उत्सुक र स्वागत गर्न तम्तयार लाग्थे । यत्तिकैमा पर्रर ताली छुट्यो र मञ्चबाट उद्घोषण भयो, ‘सम्माननीय सभामुख ओनसरी घर्तीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ...।’ यो दृश्य ललितपुर खोकनास्थित रुद्रायणी माविको हो । यही १ चैतका दिन विद्यालयले अपार खुशी साट्न आयोजना गरेको समारोह थियो त्यो । २०७२ को महाभूकम्पले क्षतविक्षत बनेपछि स्कूलले आ ...
एसइइ परीक्षाका लागि केही टिप्सहरु
बाबुकाजी कार्की यसवर्षको एसइइ परीक्षा यही चैत्र ३ गते बिहान ८ बजे देखि ११ बजे सम्म संचालन हुँदै छ । एसइइ लेटर ग्रेडिंग मूल्यांकन पद्धतिको अन्यौलता र अनविज्ञताले पनि परीक्षार्थीलाई आफ्नो नतिजाको बारेमा रणभूल्ल बनाएको छ । गत बर्ष सरकार र सरोकार पक्ष बीच प्रचुर संवाद र सहकार्य बिना नै ल्याइएको यस मूलांकन पद्धति बारे अझै आमरुपमा स्पष्ट भै सकेको छैन् । लेटर ग्रेडिंग मूल्यांकन प्रणालीका विभिन्न पक्षमा अन्यौलता अझै जिज्ञाषाका विषय नै बनेको छ । कसैले पनि फेलको बिल्ला भिर्नु नपर्ने हौवाको वास्तविक ...